အဆိုပါ "နဂါး'S လက်လှမ်းမီမှုအခြေအနေကို" 2:
တရုတ်-အာဖရိကခုန်-ရှေ့ဆက်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးလည်ချောင်းထဲမှာတစ်ဦးသက်ပြင်းချကဲ့သို့ဖြစ်၏, United States နှင့်ဥရောပမုသာလူးနှင့်အလှည့်ယူရမယ့်အလှည့်စေခဲ့သည်။
အတိတ်အတွက်အနောက်၏ကိုလိုနီများကကျန်ရစ်သမိုင်းဆိုင်ရာပြဿနာတွေနေသောယခုအာဖရိကမှာပွဿနာမြားစှာရှိပါတယ်။ အာဖရိကရဲ့ဆင်းရဲမွဲတေမှုနောက်ကျကျန်ရစ်နေသည်, နှင့်အနောက်တိုင်းနိုင်ငံများတွင်အပြစ်တင်ရန်ခဲယဉ်းဖြစ်ကြသည်။ သို့သော်အနောက်တိုင်းနိုင်ငံရေးသမားများနှင့်မီဒီယာတရုတ်အပေါ်ဒီပြဿနာတွေကိုထည့်သွင်းနှင့်တရုတ်နိုင်ငံရာစုနှစ်အနောက်တိုင်းကိုလိုနီအာဖရိကများအတွက်ပေးဆောင်ကြကုန်အံ့ပါပြီ။ ဒါရိုးရှင်းသောတကယ်လား?
အချိန်ကြာမြင့်စွာ, အနောကျပိုငျးမီဒီယာနှင့်နိုင်ငံရေးသမားများသည်မုသာနှင့်အာဖရိကမှကောလာဟလတရုတ်နိုင်ငံ၏အကူအညီများသိက္ခာချခြင်းနှင့်ဖန်တီးဆက်လက်ပါပြီ။ ရေးသားသူအနည်းငယ်ဥပမာပေးသည်:
ဥပမာ 1 Smearing: 2011 ခုနှစ်ရဲ့အစမှာဗြိတိသျှအသံလွှင့်ကော်ပိုရေးရှင်း (ဘီဘီစီ) ကအနောက်တိုင်းရှုထောင့်ကတဆင့်အာဖရိကအတွက်တရုတ်ကုမ္ပဏီများနှင့်တစ်ဦးချင်းစီ၏ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနှင့်စစ်ဆင်ရေးရောင်ပြန်ဟပ်ဖို့ရည်ရွယ်ထားတဲ့ "ဒီတရုတ်လူမျိုးတွေလာကုန်ပြီ" ဟုခေါ်နေတဲ့မှတ်တမ်းရုပ်ရှင်, စတင်ဆောင်ရွက်ခဲ့သည်။ တူနှစျတှငျ, အာဖရိကအတွက်ဆင်ဟွာသတင်းအေဂျင်စီရဲ့သတင်းထောက်အာဖရိကမှာရုပ်ရှင်ရဲ့တုံ့ပြန်မှုမေးမြန်းထားသည်။ အတော်များများကဒေသခံဖြေဆိုသူဘီဘီစီရဲ့အစီရင်ခံစာ "ပျောက်ဆုံးနေတဲ့" ခဲ့ပြီးသော၏အဓိကရည်ရွယ်ချက်ကိုတရုတ်၏ပုံရိပ်စီရင်ချက်ကိုပယ်နှင့်အာဖရိကအတွက် Anti-တရုတ်စိတ်ဓါတ်များလှုံ့ဆော်ခဲ့ဟုဆိုသည်။ စာရာသည် Qi, စီးပွားရေးနှင့်ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးနဲ့ကုန်သွယ်ရေးဟာဇမျဘီယာန်ကြီးဌာန, မှတ်တမ်းရုပ်ရှင်, တရုတ်ကုမ္ပဏီများဆန့်ကျင်နေတဲ့ဗြိတိန်စုံတွဲရဲ့စွပ်စွဲချက်အတွက် "ဟုအဆိုပါ Luanxia ကြေးနီသတ္တုတွင်းလုပ်ငန်းလည်ပတ်မှုအပေါ်ယူပြီးပြီးနောက်, မခွဲခြားဘဲသဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းမှုနှင့်ဖွံ့ဖြိုးရေးအရင်းအမြစ်တွေကိုသာ" သက်သက်သာ "အနတ္တ" ကယုံကြည်သည်။ သူ Luanxia ကြေးနီစီမံကိန်းတစ်ချိန်ကစွန့်ပစ်နှင့်တရုတ်ကုမ္ပဏီများဒေသတွင်း၌ 1000 ကျော်မိသားစုများအတွက်အသက်အရင်းအမြစ်ပေးနဲ့သူတို့ရဲ့သားသမီးတွေအတွက်ပညာရေးဆိုင်ရာအခွင့်အလမ်းများပေးအပ်ခြင်း, သူတို့ကိုပြန်လည်ပြီခံခဲ့ရသည်ဟုဆိုသည်။ အဆိုပါဇမျဘီယာအစိုးရအမျိုးသားစီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအတွက်ကြေးနီမိုင်းထံမှအခွန်ဝင်ငွေပမာဏကိုလည်းရရှိထားခဲ့သည်။
ဥပမာအားဖြင့်2Smearing: မတ်လ 12, 2013 တွင်ဗြိတိသျှတို့ "Financial Times" တရုတ် "အာဖရိကမှကုန်ကြမ်းကြာပြီးတော့အာဖရိကမှထုတ်လုပ်ကုန်ပစ္စည်းများရောင်းချဟုဆောင်းပါးတစ်ပုဒ်ထုတ်ဝေဒီကိုလိုနီစနစ်၏စစ်မှန်တဲ့အနှစ်သာရနှင့်အာဖရိက၏ဗြိတိသျှသိမ်းပိုက်သည်။ နှင့်အိန္ဒိယနိုင်ငံရဲ့ကုန်ကြမ်းများနှင့်စျေးကွက်အတူတူပါပဲ။ "
- ကိုလိုနီစနစ်ကဘာလဲ? ဝီကီပီးဒီးယား၏အဆိုအရကိုလိုနီစနစ်နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံအခြားသောအရပ်သို့မဟုတ်ယင်း၏လူမျိုး၏အုပ်ချုပ်ရေးအာဏာကိုရှာကြံသို့မဟုတ်ရရှိသည်ပေးသောအားဖြင့်တစ်ဦးနည်းလမ်းများဖြစ်ပါသည်။ ဒေသခံပြည်သူများမှလူမဆန်စွာနှင့်ဖိနှိပ်ချုပ်ချယ်သောကိုလိုနီအများအပြားကနိုင်ငံရေးပြည်နယ်များကိုမကြာခဏရှိပါတယ်။ လူတိုင်းသမိုင်းကိုကြည့်နိုင်ပါတယ်။ ဟူသောဝေါဟာရကိုကိုလိုနီစနစ်, အထူးသဖြင့်ယူနိုက်တက်ကင်းဒမ်းနေသူများကဖန်တီးသောအနောက်တိုင်းနိုင်ငံများ, ကိုလိုနီစနစ်ဘို့အခြားသူတွေအပြစ်တင်ဖို့အနည်းဆုံးအရည်အချင်းပြည့်များမှာ! ပြီးခဲ့သည့်ရာစု၏အင်ပါယာကိုလိုနီစနစ်ယခုသူခိုးသူခိုးဖမ်းရန်ကိုအော်, ကမ္ဘာပေါ်မှာမြေကြီးတပြင်ရဲ့အရင်းအမြစ်များကိုဆုတ်ယုတ်လာခဲ့သည်? ငါအခုတော့ရယ်မော!
အဘယ်အရာကိုအနောက်တိုင်းသားအာဖရိကမှယူဆောင်လာအသားအရောင်ခွဲခြားရေး, ဖြောင့်လိုင်းနယ်နိမိတ်, ကဒါဖီသတ်ဖြတ်, ဘာသာရေးပဋိပက္ခများ, အဘယ်အရာကိုတခြားပါသလဲ တရုတ်အာဖရိကမှလမ်းဆောင်ခဲ့ပြီထိုအရပ်၌များစွာသောကုန်ပစ္စည်းများနေဆဲဖြစ်ကြောင်း, ဒါပေမယ့်တရုတ်ဘာသာရေးပဋိပက္ခများ, တိုင်းရင်းသားပဋိပက္ခများမဆောင်ခဲ့သိရသည်။ အဆိုပါအချုပ်အခြာအာဏာကိုရေးဆွဲလျက်ရှိ၏ တရုတ်သာအာဖရိကန်နှင့်အတူစီးပွားရေးလုပ်ငန်းလုပ်နေတာ, သူတို့ကတစ်ဦးတန်းတူအပေါ်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းလုပ်နေတာ။
တရုတ်အာဖရိကနိုင်ငံများဆည်းပူးဖို့အုပ်ချုပ်ရေးအာဏာကိုရှိပါသလား အဘယ်သူမျှမ! တရုတ်အာဖရိကဖို့အုပ်ချုပ်ရေးမှူးအဖြစ်ခန့်အပ်ခဲ့ကြပါသလား? အဘယ်သူမျှမ! တရုတ်တရားဝင်ဘာသာစကားအဖြစ်တရုတ်စာရင်းပြုစုဖို့အာဖရိကနိုင်ငံများတွင်မလိုအပ်ပါဘူး!
တရုတ်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများများ၏ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအတွက်လက်မှတ်ရေးထိုးသဘောတူညီချက်မူဘောင်အတွင်းတရားမျှတသောကုန်သွယ်မှုဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့်ကုန်ဖလှယ်ရေးဖြစ်ပါတယ်ရင်တောင်ကြောင့်လည်းလူသားထု၏အစောဆုံးစီးပွားဖြစ်ဂေဟဗေဒဖြစ်ပါတယ်။ ဘယ်လိုကိုလိုနီခေတ်ငှါလာသလော သငျသညျအမည်ပြောင်တရုတ်ဒေသခံပြည်သူများမညှဉ်းဆဲဖို့ဆိုရငျ, ရုံ 12 နှစ်ဖွင့်လှစ်ခြင်း, အဖြစ်အများအပြား 50 အဖြစ်နိုင်ငံအများပါဝင်ဆောင်ရွက်ရန်တရုတ်အာဖရိကဖိုရမ်ကိုမေး?
ဂျီဘူတီနိုင်ငံကသမ္မတအစ္စမေးလ်အိုမာ Guellehas ဇူလိုင်လ 4, 2018 ရက်တွင်ဂျီဘူတီနိုင်ငံမှာရှိတဲ့ 1000-ရန်ပုံငွေအိမ်ရာဆောက်လုပ်ရေးစီမံကိန်းကိုစတင်ရှေ့တော်၌ထိုတရုတ်အလံများ၏ရှေ့မှောက်၌ဂျီဘူတီနိုင်ငံအလံကိုင်ရန်အဘို့အဖြေကောင်လေးစောင့်ကြည့်နေကြတယ်။
ဥပမာအားဖြင့်3Smearing: ဇူလိုင်လ 26, 2018 တွင်, Wall Street Journal မှခေါင်းစဉ်တစ်ခုဝေဖန်သုံးသပ်ချက်ထုတ်ဝေခဲ့သည် "တရုတ်ကိုပိုမိုအာဖရိကနိုင်ငံများအဘို့အကြွေးရှင်နိုင်ငံကဖြစ်လာသည်။ " တရုတ်ပြီးသားအာဖရိကရဲ့အကြီးဆုံးကုန်သွယ်ဖက်နိုင်ငံဖြစ်ပြီးယခုအာဖရိကရဲ့အကြီးဆုံးဖြစ်ပါတယ်။ ကြွေးရှင်နိုင်ငံက။ အဆိုပါဆိုလိုတရုတ်ဒီတော့အပေါ်အာဖရိကကိုထိန်းချုပ်ရန်နှင့်မည်, အာဖရိကန်ခြိမ်းခြောက်ရန်ဖြစ်ပါသည်။
- အကြီးမားဆုံးမြီရှင်နိုင်ငံကခြိမ်းခြောက်သလား အမေရိကန်မီဒီယာဖြစ်ကောင်းတရုတ်အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု၏ပထမဦးဆုံးကြွေးရှင်သည်နှင့်ဂျပန်နီးကပ်စွာအောက်ပါကြောင်းမေ့လျော့ကြ၏။ သို့သော်တရုတ်, ဂျပန်အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုကိုထိန်းချုပ်သလဲ? အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုအပေါ်မည်သည့်နိုင်ငံရေးသြဇာရှိပါသလော သငျသညျတရုတ်-အမေရိကန်ကုန်သွယ်ရေးစစ်ပွဲကိုကြည့်လျှင်, သင်ပထမဦးဆုံးကြွေးရှင်နိုင်ငံကမှာအားလုံးအဘယ်သူမျှမအခြေအနေ, နှင့်အများပြည်သူထင်မြင်ချက်၏သြဇာလွှမ်းမိုးမှုရှိကြောင်းနားလည်သဘောပေါက်ကြမည်နည်း ဗြိတိန်နိုင်ငံကတခြားနိုင်ငံတွေကိုလိုနီဖြစ်ကြပါလျှင်အပြစ်တင်ဖို့အနည်းဆုံးအရည်အချင်းပြည့်သည်ဆိုပါက, ထို့နောက်အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု "အကြွေး" ပြောအနည်းဆုံးအရည်အချင်းပြည့်မီနိုင်ငံဖြစ်ပါသည်။
တရုတ်ကုန်ကြမ်းရရှိရန်သာအာဖရိကမှာဖြစ်ပါသည်: ဥပမာ 1 နှင့်အိပ်ကြ၏။ သမ္မာတရားကိုအာဖရိကတိုက်ကြီးများ၏ကြွယ်ဝသောသဘာဝသယံဇာတများကိုတရုတ်ကုမ္ပဏီတွေကဆွဲဆောင်, ဒါပေမယ့်လည်းပြင်းပြင်းထန်ထန်ထိုကဲ့သို့သောရှဲလ်, Exxon Mobil နှင့် Glencore အဖြစ်အနောက်တိုင်းရေနံနှင့်သတ္ထုတူးဖော်ရေးကုမ္ပဏီကြီးများကိုဆွဲဆောင်မသာသောကွောငျ့ဖွစျသညျ။
ဥပမာအားဖြင့်2အိပ်တရုတ်ကုမ္ပဏီများအဓိကအားဖြင့်တရုတ်အလုပ်သမား employ ။ အစိုးရကတရုတ်ဆောက်လုပ်ရေးကုမ္ပဏီများသည်တရုတ်ထံမှအလုပ်သမားများကိုမိတ်ဆက်ပေးခွင့်ပြုထားခြင်း, နှင့်အာဖရိက၏အခြားအစိတ်အပိုင်းများထဲတွင်တွေ့ရှိချက်ရှင်းရှင်းလင်းလင်းများမှာ - အယ်လ်ဂျီးရီးယား, အီကွေတာဂီနီနိုင်ငံနှင့်အင်ဂိုလာအပါအဝင် - မွငျ့မားဆောက်လုပ်ရေးကုန်ကျစရိတ်နှင့်အတူအနည်းငယ်ရေနံ-ကုန်ကျစရိတ်နိုင်ငံများတွင် မှလွဲ. : အဆိုပါအမှန်တရား တရုတ်ကုမ္ပဏီများဒေသခံများဖြစ်ကြသည်အလုပ်သမားများ၏အများစုသည်ငှားရမ်း။
ဥပမာအား 1: ဖေဖော်ဝါရီလအစောပိုင်းတွင် 2018 ခုနှစ်တွင်ပြင်သစ်သတင်းစာ Le Monde ဟာအာဖရိကသမဂ္ဂဌာနချုပ်ကနေသတင်းအချက်အလက်ခိုးယူဖို့တရုတ်ကုန်းတိုက်။ အဆိုပါကောလာဟလထွက်လာသသောအခါ, အဆိုပါအာဖရိကသမဂ္ဂကော်မရှင်ဥက္ကဋ္ဌ, Faki နှင့်ထိုကဲ့သို့သောသီယိုးပီးယားနှင့်ရဝမ်ဒါအဖြစ်အများအပြားအာဖရိကနိုင်ငံများ၏ဦးခေါင်းအပါအဝင်ဖြောင့်မတ်ပထမဦးဆုံးအကြိမ်အဘို့အဒီကိစ္စကိုရှင်းလင်း။ အဆိုပါအာဖရိကသမဂ္ဂဖို့တရုတ်သံအမတ်ကြီး၏ဦးခေါင်း, ဝေ Linlin လည်းအစီရင်ခံစာတွင်ဟာမှားယွင်းတဲ့သုံးသပ်အကဲဖြတ်ချက်တွေအပေါ်ရှိခဲ့သည်ပယ်ချ။
အလွယ်တကူမရရှိနိုင်ပါသောအထက်ပါဥပမာ, အနောက်နိုင်ငံများအန္တရာယ်ရှိတဲ့နှင့်ရှက်စရာတရုတ်နှင့်ပြည့်ဝ၏ဖြစ်ကြောင်းကိုပြသပါ။ သို့သော်ဤသာသဏ္ဌာန်ဖြစ်ပါတယ်။ နောက်ဆုံးခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခုနှစ်တွင်ပထမဦးဆုံးအနောက်တိုင်းစစ်အေးစိတ်ဓာတ်နှင့်သဘောတရားဖြစ်၏ ဒုတိယတရုတ်နိုင်ငံ၏ခါးပတ်နှင့်လမ်းမကြီးကြောက်ရွံ့ခြင်းသည်။
အဘယ်ကြောင့်ကြောက်ရွံ့ရိုသေ? အဆိုပါစပိန်အယ်လ် Economista က်ဘ်ဆိုက်တရုတ်ရဲ့ "တစ်ဦးကခါးပတ်, တစ်ခုမှာလမ်းမ" ၏ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုလမ်းကြောင်းတလျှောက်အကျိုးရှိမည်ဟုနယူး Silk Road "တရုတ်ရဲ့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံဖို့ကိုဘယ်လို" ခေါင်းစဉ် "?" သြဂုတ်လ 11 ရက်နေ့ကဆောင်းပါးတစ်ပုဒ်ထုတ်ဝေခဲ့ပါတယ်။ 4.4 ဘီလီယံလူဦးရေသည်ကမ္ဘာ့စုစုပေါင်းလူဦးရေရဲ့ 63% နှင့်ညီမျှသည်, ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာစီးပွားရေး၏သုံးပုံတစ်ပုံ၎င်း၏ output ကိုအကောင့်အသစ်များ၏။
တရုတ်နိုင်ငံ၏ရည်မှန်းချက်ကြီးကုန်သွယ်မှုအစီအစဉ်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများ၏အနာဂတ်ဖြစ်လိမ့်မည်။ အန်သိုနီ, ဂျာမနီအတွက် Allianz Global Investment ရန်ပုံငွေအဖွဲ့မှာတရုတ်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု၏ဦးခေါင်း, အရှေ့တောင်အာရှနှင့်ကမ္ဘာ၏အခြားအစိတ်အပိုင်းများအတွက်စီမံကိန်းတွင်ပါဝင်နိုင်ငံများအစီအစဉ်ကနေအလွန်တရာအကျိုးရှိမည်ဟုဆိုသည်။ တကယ်တော့, ပိုပိုပြီးနိုင်ငံများနှင့်ကုမ္ပဏီများပါဝင်ကြသည်နှင့်အမေရိကန်ကုမ္ပဏီများအပါအဝင်, ကနေအမြတ်အစွန်း။ အဆိုပါကြီးတွေအိမ်ပြန်အမှန်တကယ်အရေးယူမှာ "ခါးပတ်နှင့်အလမ်းမ" အတွက်ယုံကြည်မှုနှင့်ထောက်ခံမှုကိုတစ်မဲတတ်၏။
ဒါဟာခါးပတ်နှင့်လမ်းမကြီး Initiative မှအမှန်တကယ်လောကဓာတ်လုံးကိုအကျိုးပြုသည့်စီးပွားရေးလှည့်ကွက်ကဆိုသည်နိုင်ပါသည်။ အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု၏ "အမေရိကန်ဦးစားပေး" လောကဓာတ်လုံးကိုအကြိုးမဖြစ်နိုင်ဖြစ်ပါတယ်။ အဆိုပါဥရောပအင်အားကြီးနက်နက်ရှိုင်းရှိုင်းကြွေးမြီအကျပ်အတည်း, ဒုက္ခသည်အကျပ်အတည်းများနှင့်အကြမ်းဖက်အကျပ်အတည်းအတွက် mired နေကြသည်။ ယနေ့တရုတ်နိုင်ငံအနိုင်ရလူတိုင်းအတွက်ဦးဆောင်လမ်းပြရန်စွမ်းရည်နှင့်ပြဌာန်းခွင့်ရှိပါတယ်။
လွန်ခဲ့သောဆယ်စုနှစ်အနည်းငယ်အတွင်းတရုတ်နိုင်ငံရဲ့ပင်လယ်ရပ်ခြားရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု၏ရှုထောင့်ကနေ, ကကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာစီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုရာထူးတိုးထားပါတယ်, များပြားအနောက်နိုင်ငံများအကြိုးခံစားကြပြီ။ လက်ရှိခါးပတ်နှင့်လမ်းမကြီးခြားမြေခြားရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတစ်ခုအဆင့်မြှင့်ဗားရှင်းဖြစ်ပါတယ်။ အတိတ်ကာလများတွင်တရုတ်ဟင်းချိုသောက်လူတိုင်းကိုယူ။ အခုဆိုရင်တရုတ်လူတိုင်းနဲ့အသားယူတာဖြစ်ပါတယ်။ အနောက်နိုင်ငံတွေများအတွက်မှန်ကန်သောလမ်းတရုတ်နိုင်ငံ၏ခါးပတ်နှင့်လမ်းမကြီး join နှင့်ပိုးလမ်းမကြီးများ၏စည်ကားမြင်ကွင်းတစ်ခု restore မှတရုတ်နှင့်အတူအလုပ်လုပ်ရန်ရန်ဖြစ်ပါသည်။ အဲဒီအစားအသည်းအသန်တစ်လူနေမှုအောင်, discrediting ၏!
ကခါးပတ်နှင့်လမ်းမကြီးဒါမှမဟုတ် 2025 တရုတ်ကုန်ထုတ်လုပ်မှုရှိမရှိ, ထိုအာရုံပင်လယ်ရပ်ခြားမြင့်မားတဲ့အမြတ်အစွန်းလိုက်စားတရုတ်ကုမ္ပဏီများအပေါ်မဟုတ်ပါဘူး, ဒါပေမယ့်ဖွံ့ဖြိုးဆဲနိုင်ငံများရှိလူပေါင်းများစွာမှတရုတ်နိုင်ငံ၏အကူအညီများ၎င်းတို့၏စီးပွားရေးလူ့အဖွဲ့အစည်း industrialize နှင့်အသွင်ပြောင်းဖို့။ ပိုးလမ်းမကြီး၏ဝိညာဉ်တစ်ဦးဘက်ပေါင်းစုံနှင့်ကွဲပြားခြားနားသည်ကမ္ဘာပေါ်တွင်တည်ထောင်ရန်နှင့်ငြိမ်းချမ်းစွာကုန်သွယ်ရေးနှင့်ယဉ်ကျေးမှုဖလှယ်ရေးကိုလုပ်ဆောင်သွားရန်ဖြစ်ပါသည်။ ပြုမိပါပြီအနောက်တိုင်းအဘယ်အရာကိုနိုင်ငံရေးသမားများနှင့်မီဒီယာနှိုင်းယှဉ်တကယ်ရှက်စရာပါ!
နိုင်ငံအများအပြားမှာလည်း "သူဌေးနေရာအရပ်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာငွေကြေးရန်ပုံငွေအဖွဲ့, မကမ္ဘာ့ဘဏ်, ဒါပေမယ့်တရုတ်မဟုတ်ပါဘူး။ " သဘောပေါက်ပါပြီ အမြဲတမ်းဒါကောင်းသောခဲ့သည့်အမေရိကန်, တရုတ်နှင့်ယှဉ်ပြိုင်နိုင်စေဖို့မထင်ထားဘူး။
တရုတ်တရုတ်အခြေခံအဆောက်အဦများ, ပြုပြင်ရထားလမ်း, ပြုပြင်လမ်းများ, တံတားများဆောက်နှင့်ကုန်သွယ်ရေးကိုတည်ဆောက်ရန်နှင့်အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုတို့ကယူဆောင်ကုန်သွယ်မှုအတားအဆီးများဖယ်ရှားပစ်ရန်ကြိုးစားရန်ဖွံ့ဖြိုးဆဲဆင်းရဲသောနိုင်ငံများကူညီပေးနေကြောင်းပြောပါတယ်ဆိုပါကတရုတ်ရဲ့ "hegemonic စီးပွားရေးကျူးကျော်။ " ဖြစ်ပါတယ် ဤလောက၏အအကောက်အခွန်များနှင့်ခွဲခြားသတ်မှတ်မှုမရှိဒဏ်ခတ်အရေးယူမှု၏အလေ့အကျင့်ကဘာလဲ? ဤအချည်းစည်း "hegemonic စီးပွားရေးကျူးကျော်" ပါ!